Calendar 2014 “Farm” Ikhalenda - Umagazini Design
Ikhalenda Ikhithi yezikebhe epulazini kulula ukuyihlanganisa. Akukho glue noma isikere esidingekayo. Hlanganisa ngokuhambisana izingxenye zezimpawu ezinophawu olufanayo. Isilwane ngasinye sizoba ikhalenda lezinyanga ezimbili. Imiklamo yekhwalithi inamandla wokushintsha isikhala nokuguqula imiqondo yabasebenzisi bayo. Banikeza induduzo yokubona, ukubamba nokusebenzisa. Zihlotshiswe ngokukhanya nezinto zokumangala, zicebise isikhala. Imikhiqizo yethu yasekuqaleni yakhelwe kusetshenziswa umqondo we-Life nge Design.
Igama lephrojekthi : Calendar 2014 “Farm”, Igama labaklami : Katsumi Tamura, Igama leklayenti : good morning inc..